HomeWararka CiyaarahaErik ten Hag oo Sheegay inuu kalsooni ku qabo in Manchester United ay wajihi karto Manchester City, Liverpool
Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa sheegay in uu aad u rajaynayo in uu la dagaalamo kooxaha Manchester City iyo Liverpool intii uu ku sugnaa Old Trafford.
Ten Hag ayaa markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta isniintii isagoo ah tababaraha Red Devils, isagoo tafatiray qorshihiisa mustaqbalka, iyadoo tababaraha reer Holland uu go’aansaday inuu kooxda ka caawiyo isku dayga ay ku soo laabanayaan sharaftii hore.
Man United ayaa si dhab ah u haysata boos ay kaga soo bixi karto Premier League, inkasta oo ay ku dhammaysatay kaalinta lixaad ee kala sarreynta xilli ciyaareedkan, iyagoo 35 dhibcood ka hooseeya kooxda difaacanaysa ee Manchester City.
Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta ayaa 34 dhibcood ka saraysa kooxda 20-ka jeer ku guulaysatay horyaalka Ingariiska, iyadoo labada kooxood ee ugu saraysa ay ciyaarayeen tartan xamaasad leh oo soo gaadhay waqtigii ugu danbeeyay.
Ten Hag ayaa sheegay in uu aad ula dhacsan yahay tababaraha Man City Pep Guardiola iyo kan Liverpool ee Jurgen Klopp , laakiin uu ku kalsoon yahay in uu labada naadi kala sareyn doono inta uu joogo hogaanka.